Roulette ekhasino online, European and American
I-10 ayikho i-spins ayikho idiphozi
URoulette uwuphawu lokugembula nendlovukazi yemidlalo emhlabeni wonke. Kuze kube namuhla, lapho singena ekhasino, singawuzwa umsindo webhola elilahlayo, elivele liwele emkhakheni othile wesondo elijikayo, linikeze abathokozi injabulo bese lisula izinyembezi zokugcina nemali ezivela kumawallet abantu abalahlekile.
roulette ungomunye wemidlalo yakudala yokugembula. Uhlobo lwayo lokuqala lwakhiwa ku-1645. Kwakuyinto yokudlala nje. Izinhlobo ezimbili ze-roulette kufanele zikhulunywe lapha - izinqubo zaseYurophu nezaseMelika. Uhlobo lwaseMelika lwasungulwa ngekhulu le-19 (ngemuva kokungezelelwa i-1842 ku-roulette e-0 futhi uhlelo lwabizwa nge-European roulette).
Ngabe i-European version ihluke kanjani kwinguqulo yaseMelika? Ku-roulette yaseMelika, abadlali namakhasino banensimu eyodwa ngaphezulu abanayo - inkundla ye-00 ingeziwe. Lokhu kuhlotshaniswa namabhonasi nemithetho eminingi, sibonga ukuthi singakhuphula ukunqoba noma ukukhulisa ukuhlulwa. Ochwepheshe bakaRoulette, noma kunjalo, bathi inguqulo yaseMelika inzima kakhulu futhi yadalelwa ukuvikela kuphela yekhasino ngaphambi kokuwina okumangalisayo kwabadlali. Amathuba okuwina ngensimu eyengeziwe nemithetho I-roulette yaseMelika incane kakhulu kunalesi sohlelo lwaseYurophu - ngakho-ke abadlali abanekhono ababala kuphela imali enkulu bancike eRoulette yaseYurophu (okwathi, ngendlela, kwi1842 nayo yadalelwa ukuvikela izindlu zokugembula, i.e. amakhasino, ekuwineni).
Ngabe ubukeka kanjani lo mdlalo?
Abadlali bame etafuleni elikhulu elinezinombolo nesondo elikhulu. Lapho ukubheja okwamukelekayo kuhlala (ukubheja kwamukelwa ngumthengisi, obhekele futhi ukubeka isondo ngokuhamba), umthengisi uqala ukusebenza. Okokuqala, isondo liyaxhuma ukuvumela ibhola elincane ukuba likungene ngemuva kwesikhashana. Ibhola lizungeza liqonde ngaphesheya esondweni, bese kuthi kanye nokujika okuguqukayo kuwele kwelinye lamasimu amaningi. Izinkambu zimelela izinombolo nemibala. Umdlali angabheja amabanga ezinombolo, inombolo eqondile (eyingozi kakhulu) noma umbala. Yimibala evame ukukhethwa ngabadlali - phela, sinesilinganiso 50: 50. Ukuphambuka kuphela ukudonswa kwensimu ye-0, lapho ibhodwe ligcinwa yi-casino kuze kube ngumzuliswano olandelayo.
Kunezinhlelo eziningi zomdlalo we-roulette. Imiyalo ethandwa kakhulu yokutshala imali encane kanye nokuphindeka okuhleliwe kokubheja, ukubheja kumbala owodwa kuphela. Amanye amasu adinga ukuthi ubheje kuphela kububanzi bezinombolo ezithile. Lokhu kuyasebenza, kepha kudinga ukuthi umdlali axhumanise umdlalo njalo. Iphutha elilodwa lanele ukulahlekelwa yisamba esikhulu.